Dood ciyaaraha koobka adduunka - BBC Somali
Dood ciyaaraha koobka adduunka
Image caption Dood ciyaaraha adduunka oo lagu qabtay Garoowe
Iyadoo dalka Koonfur Africa uu ka socdo tartankii koobka kubbadda cagta adduunka ee 2010, ayaa waxaa tartankan lagu tilmaamay mid ay si wayn ula socdaan dad fara badan oo daafaha caalamka ku dhaqan.
Haddaba weriyaha BBCda Axmed Maxamed Cali ayaa magaalada Garowe dood ugu qabtay saddex ka mid ah dadka ku hawlan hawlaha ciyaaraha, isla markaasna si wayn ula socda tartanka koobka kubbadda cagta adduunka ee ka socda K.Afrika taas oo dhinacyo kala duwan looga eegayo tartankaas.
Falanqaynta waxaa ka qaybgalaya xoghaya sportiga gobolka Nugaal Haybe Xasan Ducaale, Maxamed Warsame xirsi oo ah garsoore heerka koowaad ah iyo Cabdi Axmed Cali oo isaguna ah ciyaartoy ka tirsan naadiyada heerka koowaad ee Puntland.
Dooddu waxay si gaar ah diiradda u saaraysaa dhinacyo kala duwan oo la xiriira dhinaca heerka awoodeed ee kooxaha ka qaybgalaya iyo dood ku saabsan in dalal waawayn oo looga dambeeyay kubbadda cagta sida Barazil, Talyaaniga iyo England ay u muuqdaan sannadkan inay aad uga hooseeyaan sidii laga filayay halka kuwo kale oo waqtiyadii hore heerkoodu hooseeyay ay hadda safka hore soo galeen sida kooxda Waqooyiga Korea.
Saadaal ku aaddan cidda sannadkan looga cabsi qabo inay ku guulaysato koobka kubbadda cagta ee adduunka ayay dooddu taabatay, waxaa kale oo iyana aan meesha ka maqnayn in ciyaartoy waawayn aanay soo bandhigin ciyaarihii ay dadku ka sugayeen.
Dhinaca garsoorka ee tartanka iyo khaladaadka ka jira, ciqaab la saaray dad aan mutaysan ama gefaf kale oo garsoorku aanu ku baraarugin ayay dooddu qaadaa dhigaysaa.
Su'aasha ugu horraysa ee la waydiyay ka qaybgalayaasha doodu waxay ahayd dalka la filayo inuu sannadkan ku guulaysto koobka kubbadda cagta adduunka, waxana marka hore ka jawaabaya Haybe Xasan Ducaale.